पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको भन्छन् : सीमा विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्न तयार छु - हाम्रो शब्द
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको भन्छन् : सीमा विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्न तयार छु
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि भारतीय नेतासँग आफूले छलफल गरिरहेकोसमेत बताए ।
उनले भारतीय नेताहरूले वार्ताको वातावरण बनाउन आफूलाई पटकपटक आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । ‘भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमन जेएनयुकै सहपाठी हुुनुहुन्छ’ डा. भट्टराईले भने, ‘उहाँहरूसँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि भएकाले वेलावेलामा सम्पर्क भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले वार्ताको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै आफू सहजीकरण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट दुई देशबीचको वर्तमान सीमा विवादको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको खोसिएको भूमि प्राप्त गर्न फौजी ढंगले अघि बढ्नु अहिलेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक हुने बताए ।
‘कालापानी क्षेत्रका विषयमा जुन कुरा उठेको छ, त्यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमि कसैले खोसेर लान त सक्दैन,’ डा. भट्टराईले भने, ‘अब अत्यन्त जिम्मेवार ढंगले राजनीतिक र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधानको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
कोरोना महामारीपछि नयाँ शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता : प्रचण्ड